CAB Gadzira Chishandiso. Gadzirisa Uori CAB Mafaira.
DataNumen CAB Repair ndiro yakanakisisa CAB kupora chishandiso munyika. Inogona kugadzirisa yakaora CAB matura uye dzore yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa mufaira huori.
4.90 / 5 (kubva 1,646 mavhoti)
Sei DataNumen CAB Repair?
Chirongwa chako chakaita sechiri kushanda mushe sezvo ini ndaikwanisa kuwana mafaera
mumahwindo ekutsvagisa kana chirongwa chekuchengetedza.
Zvakare, ndinokutendai neako
Zvakare, ndinokutendai nerubatsiro rwenyu nechirongwa uye ndichadaro
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen CAB Repair v2.4
Kutsigira kugadzirisa vhezheni yese yeMicrosoft cabinet mafaera.
Kutsigira kugadzirisa CAB mafaira akatsimbirwa neMSZIP, LZX uye Quantum nzira.
Kutsigira kugadzirisa CAB mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch ye CAB mafaira.
Ipa stub yeEEE uye ubudise faira reSFX pazvinenge zvichidikanwa.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo CAB mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemutengi.
kushandisa DataNumen CAB Repair Kudzorera Yakakuvara MS Cabinet Archives
Kana yako Microsoft cabinet zvinyorwa (.CAB mafaera) akakuvadzwa kana akaora uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen CAB Repair kuongorora iyo.CAB mafaira uye dzosa iyo data kubva kumafaira zvakanyanya sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzorera chero chakakuvara kana chakaora CAB mafaira ane DataNumen CAB RepairNdokumbirawo muvhare chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo CAB ikwidzwe.
Sarudza iyo yakakuvara kana yakashata CAB faira ichagadziriswa:
Unogona kuisa iyo CAB filename zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo CAB dura rekugadzirisa pane komputa yemuno.
By default, DataNumen CAB Repair ichaponesa iyo yakagadziriswa CAB faira mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.cab, uko xxxx ndiro zita rezvinobva CAB faira. Semuenzaniso, for source CAB faira Yakakuvara.cab , iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira richava Damaged_fixed.cab. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Baya bhatani, uye DataNumen CAB Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi CAB faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iri sosi CAB faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakagadziriswa CAB faira naWinZip, WinRAR kana zvimwe zvinoshandiswa zvinotsigira CAB mafaira.
DataNumen CAB Repair 2.4 inoburitswa muna Zvita 21, 2020
DataNumen CAB Repair 2.2 inoburitswa munaNovember 5th, 2020
DataNumen CAB Repair 2.1 inoburitswa muna Ndira 23, 2019
Tsigira Windows 8.1 uye 10.
DataNumen CAB Repair 2.0 yakaburitswa munaNovember 9, 2013